मनकारी डाक्टरहरूले बचाएकी २४ वर्षीया लाली थप पढनुहोस – Karuna Hospital
मनकारी डाक्टरहरूले बचाएकी २४ वर्षीया लाली थप पढनुहोस
१३ कात्तिकमा मध्यरात पौने दुई बजे गाइनोकोलोजिष्ट डा. गहना गुरुङ मस्त निन्द्रामा थिइन् । मोबाइलमा घण्टी बज्यो । एक जना सिकिस्त बिरामी अस्पताल भर्ना भएका छन्, उपचार गर्नुप¥यो । हिमाललगायतका झण्डै एक दर्जन अस्पतालबाट भौतारिदै चिनजानमार्फत बुढानिलकण्ठस्थित करुणा अस्पताल आइपुगेकी थिइन्, ती बिरामी ।
सुदूरपश्चिमको कैलाली धनगढीकी २४ वर्षीया लाली चौधरी अवस्था क्रिटिकल थियो । अस्पताल पुगेर डा. गहनाले बिरामीको अवस्था चेकजाँच गर्न थालिन् । उनलाई हेल्प सिन्ड्रोम (प्रेग्नेन्सी कप्लिकेसन) भएको पत्ता लाग्यो । शरीरमा १ लाख ५० हजारदेखि ४ लाखसम्म हुनुपर्ने प्लेटलेस १५—१६ हजारमा झरेको थियो । बिरामीलाई श्वास फेर्नेलगायतका जटिल स्वास्थ्य समस्याहरु थिए ।
डा. गहनाका अगाडि प्रश्न खडा भयो रिस्क लिने कि नलिने ? यसो हेरिन्, बिरामी २४ वर्षको कलिलो उमेरकी । उनले सोचिन्, ‘कसरी यतिकै छोड्नु ? मैले रिस्क लिए भने त एक जीवन जोगाउन सकिन्छ । रिस्क नै लिइन भने त निश्चित छ एक जीवन सकिन्छ ।’ उनले आँट बटुलिन् । बिरामी पक्षलाई बिरामीको अवस्थाका बारेमा ब्रिफिङ गर्दै प्लेटलेसको जोहो गर्न लगाइन् ।
त्यसका लागि करुणा अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) डा. रामकुमार श्रेष्ठले आफ्नो गाडी नै बिरामी पक्षलाई दिएर रगत खोज्न दौडाए । बिरामी पक्षसँग उपचारका लागि आवश्यक पर्ने खर्च समेत थिएन् । अस्पतालले पैसा बिना नै शल्यक्रियाको तयारी द्रुत गतिमा अगाडि बढायो । १४ कात्तिकको विहानैदेखि सुरु गरिएको शल्यक्रियाको तयारी राति ९ बजे सकियो । बिरामीलाई ४ पिन्ट रगत दिएर प्लेटसलेस संख्या ४८ हजार पु¥याइयो ।
बुद्धिरामका साथीभाइ र घरपरिवारले नेपालगन्जमा उपचार नभए काठमाडौं नै लानुपर्छ भन्दैं काठमाडौं नै लग्न सुझाव दिए । त्यसपछि बुद्धिराम बिरामी श्रीमती लिएर हवाईजहाजमा काठमाडौं आए । काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित हिमाल अस्पतालमा एक रात आईसीयुमा राखे । हिमाल अस्पतालले भोलिपल्ट १३ कात्तिकमा वीर अस्पतालमा रिफर गरिदियो । वीर अस्पतालमा गाइनो सेवा नभएकाले त्यहाँबाट उनीहरु सर्वाङ नर्सिङ होम पुगे । त्यहाँ भिडियो एक्सरे गरे, तर त्यहाँ पनि उपचार भएन । यतिन्जेल राति भइसकेको थियो । त्यसपछि उनीहरु त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगे । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आईसीयु बेड पाएनन् ।
रातभर दर्जनौ अस्पताल चहार्दा
धनगढी उपमहानरपालिकाका बुद्धिराम चौधरी २८ वर्षका भए । उनकी २४ वर्षीया श्रीमती लाली चौधरी २२ हप्ताका गर्भवती थिइन् । १० कात्तिकमा राति १० बजे उनकी श्रीमतीमा श्वास फेर्न गाह्रो, ज्वरो आउने, बस्नै नमिल्ने, छाती दुख्नेलगायतका समस्या देखिन थाले । त्यसपछि उनले नवजीवन अस्पताल लगे । त्यहाँका चिकित्सकहरुले आईसीयु भएको अस्पतालमा लैजान सुझाए । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा लगे । त्यहाँ पनि आईसीयु पाएनन् ।
त्यसपछि उनले आईसीयुको खोजीमा माया मेट्रो अस्पताल लगे । ‘त्यहाँ पनि आईसीयु पाइन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि निसर्ग अस्पताल लगे ।’ त्यहाँका ड्युटी चिकित्सकले आईसीयुमा राख्नुपर्ने अवस्था छैन भन्दैं जनरल वार्डमा भर्ना गरिदिए । अवस्था झन बिग्रदैं गइरहेको थियो । विहान विशेषज्ञ चिकित्सक आएर चेकजाँच गरे । ती चिकित्सकले नेपालगन्ज लैजान सुझाव दिए ।
यसरी बचायौं लालीलाई : डाक्टर अनुभव
डा. गहना गुरुङ, गाइनोकोलोजिष्ट, करुणा अस्पताल
लालीलाई हेल्प सिन्ड्रोम (प्रेग्नेन्सी कप्लिकेसन) भएको थियो । यसले कलेजोको एन्जाइमलाई तलमाथि गराउने हुन्छ । कलेजोले नै काम गर्न छाड्ने हुन्छ । रगतलाई हानी पु¥याउने, हेमोग्लोबिनलाई निकै लो बनाइदिन्छ । बिरामीलाई रिगंटा लाग्ने, पेट दुख्ने, श्वासप्रश्वासमा समस्या हुने, आँखा धमिलो देखिने हुन्छ ।
लालीको अवस्था निकै क्रिटिकल थियो । तर, पनि हामीले रिस्क लियौं किनकि त्यसबाहेक अर्को कुनै पनि विकल्प थिएन । यो बेलामा कतै ज्यानमा काटियो भने पनि त्यहीबाट रगत गएर मृत्युसमेत हुनसक्ने खतरा रहन्छ । उनी मात्र २४ वर्षकी थिइन् । विकल्प अप्रेशन मात्र थियो । उनका श्रीमानको अवस्था पनि नाजुक थियो ।
१२—१३ वटा अस्पताल धाइसकेका थिए । पैसा पनि सकिसकेको थियो । यो रोग त गर्भवतीको सालको रोग भयो । हामीले बच्चा चाहिँ निकाल्छौ तर बच्चाको आशा नगर्नु भनेका थियौं । श्वासप्रश्वासका लागि पाइप लगाउनुपर्ने अवस्था थियो । लालीको अवस्था ८० वर्षको बुढापाका गम्भीर भएर अस्पताल भर्ना भएकोजस्तो अवस्था थियो ।
४ पिन्ट रगत चढाएका थियौं । हामीले तुरुन्तै रातिसम्म तयार गर्नु भन्यौं । त्यही राती ९ बजेसम्म उहाँहरुले तयार गराउनुभयो । त्यति गर्दा ४८ हजार प्लेटलेस आयो, त्यो पनि राम्रो स्थिति थिएन् । टिमले त्यसपछि रिस्क लिने सल्लाह भयो । र, हामीले करिब १० बजे तिर अप्रेसन सुरु गर्यौं । भाग्यबस रगत जानुपर्ने हो, त्यति चाहिं गएन् । हामीले पौने १ सम्म लगाएर अप्रेशन गर्यौं । उनलाई आईसीयुमा सिफ्ट गर्यौं । त्यहाँ पुग्दा सेतो रगत घट्दै गैसकेको थियो ।
PrevPreviousबुढानिलकण्ठमा आगो नियन्त्रण लिएको सिम्रिक इयरको करुणा अस्पतालमा ट्रान्जिट
बुढानिलकण्ठमा आगो नियन्त्रण लिएको सिम्रिक इयरको करुणा अस्पतालमा ट्रान्जिट
कपन अनलाइन काठमाण्डौ ,चैत्र २९। बुढानिलकण्ठमा आगो नियन्त्रण लिएको सिम्रिक इयरको बुढानिलकण्ठ -१३ मा रहेको करुणा अस्पतालको हेलिप्याडलाई ट्रान्जिटका रुपमा
FREE CONSULTATION AND OPD AT KARUNA FOR THE MONTH OF MAGH, 2077
-August Rush Singh [email protected] | वि.सं २०७७, माघ २, शुक्रबार Karuna hospital has launchedamonth long free OPD campaign
Laser Surgery (RIRS) for Kidney Stones started at Karuna Hospital
Jan 12, 2021 Karuna Hospital, A multi specialty hospital located at Budhanilkantha, Kathmandu has started incision less surgery for Kidney
Notice for short-listed applicants (OT Staff Nurse)
Below are the short-listed candidates for the interview for the post of OT Nurse at Karuna Hospital Applicants who has
Copyright © 2022 Karuna Hospital | Powered by Pasal.com.np